चिसोका कारण मनाङका हिमताल जम्न थाले : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशप्रदेश ५चिसोका कारण मनाङका हिमताल जम्न थाले
लमजुङ । हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा हिमताल जम्न थालेका छन् । पुस महिना सुरु भएसँगै ह्वात्तै चिसो बढेका कारणले गर्दा हिमतालको पानी जम्न थालेको हो ।
तालको पानी जमेर हिउँको चट्टानमा परिणत भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । समुद्र सतहदेखि ३ हजार ५४० मिटर उचाइमा रहेको गंगापूर्ण तालको पानी जमिसकेको मनाङका पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी विकास गुरुङले बताए । उनका अनुसार संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको मानिने तिलिचो ताल (४,९१९ मि.), भ्राकामा पर्ने आइसलेकमा (४,६०० मि.) पानी जमेर चट्टानमा परिणत भएको छ । मनाङमा रहेका तालमध्ये गंगापूर्ण कम उचाइ र मानवबस्तीनजिक रहेको ताल भनी उनले जानकारी दिए । तिलिचोभन्दा अग्लो ठाउँ चामे गाउँपालिका– ४ को कजिनसारा (५००२ मि.) तालको पानी पनि जमेको मनाङबासी बताउँछन् ।
यसैगरी, नासो गाउँपालिकाको धारापानी, नाचैंमा पर्ने डोना ताल (४,७०० मि.), थोंचेमा पर्ने पोंकर ताल (३,९७५ मि.)लगायतका तालमा रहेको पानी जम्न थालेको स्थानीयबासीको भनाइ छ । त्यति मात्र होइन मनाङको माथिल्लो मनाङ क्षेत्रमा चिसो बढ्नाले खानेपानीका पाइपभित्र पानी जमेर खानेपानीका लागि समस्या हुन थालेको मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताए । उनका अनुसार जिल्लाको तापक्रम घट्दै गएपछि पानी जमेर चट्टानमा परिणत भएको छ । चिसो बढेका कारण गंगापूर्ण तालसहित दर्जनौं ताल जम्न थालेका छन् ङिस्याङ गाउँपालिका–६ मनाङ गाउँको होटल तिलिचोका सञ्चालक छिरिङ लोप्साङ गुरुङले बताए । उनका अनुसार चिसो अत्याधिक बढेपछि बस्तीनजिकैका तथा हिमालनजिकका ताल जमेका छन् ।
अब माघ–फागुनसम्म सबै हिमताल र खोल्साखोल्सीमा बगेको पानी जम्ने मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–१ पिसाङका छिरिङ गुरुङले चिसोका कारण ताल जमेको बताए । उनका अनुसार गाउँनजिकैको मिङ्ग्रे, कालोपोखरी, ढिकुरपोखरी, क्याम्बिलगायतका ताल जम्न थालेको छ । चिसो बढ्दै गएपछि जनवीवन बिस्तारै प्रभावित हुँदै गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले बताए ।
उनका अनुसार मनाङको तापक्रम साँझबिहान माइनस ७÷८ डिग्री सेल्सियसमा झर्न थालेको छ । दिउँसो घाम लागेको अवस्थामा माइनस ५ डिग्री सेल्सियस हुन्छ । रातको समय भने माइनस १२ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्न थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले जनाकारी दिए । उनका अनुसार फागुनसम्म हिमताल जम्ने र चैत, वैशाखतिर बिस्तारै पग्लिन थाल्ने स्थानीयले बताएका छन् ।
आफैले काटेकाे रुखले किचेर दुई जनाको मृत्यु
धनकुटा। धनकुटाका दुई वेग्ला–वेग्लै स्थानमा मंगलबार रुखले किचेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिका–७ साफु र सहिदभूमि गाउँपालिका–३ छिन्ताङमा रुखले किचेर दुइ...